NLD YOUTH LA MALAYSIA: January 2013
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 11:26 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ကျနော်တို့ရဲ့ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ရဲ့ ဒဿမမြောက် ပြည်ပနိုင်ငံခရီးစဉ်အဖြစ် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံကို တနလာင်္နေ့ကပဲ ဆိုက်ရောက်သွားပါပြီ။
ဒီခရီးစဉ်မတိုင်မီ ဟာဝိုင်ယီကျွန်း အလည်ပတ်ခရီးစဉ်ကတော့ မွန်းကြပ်ရှုတ်ထွေးပြီး၊ ဝေဖန်မှုတွေ အငြင်းပွားစရာတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကရဲ့ ဘ၀အမောတွေကို
ဟာဝိုင်ယီကျွန်းရဲ့ သဘာဝအလှတွေ၊ ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေရဲ့ ပျူငှာနွေးထွေးပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကြိုဆိုဧည့်ခံမှု၊ ထူးခြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊
အစားအသောက်တွေက.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်၊ သတိတရ စာတိုပေစရေးစရာလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလို၊ တသက်တာအတွက် လှပတဲ့အိပ်မက်တွေလို သူ့စိတ်အာရုံမှာ မမေ့မပျောက် ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့တတွေက တိုက်ပွဲထဲကနေရထားတဲ့ ရှားရှားပါးပါး လူထုခေါင်းဆောင်ကို အဲဒီလို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အပူအပင်ကင်းကင်း ရှိနေတာ မြင်ချင်တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ဟာ တိုင်းပြည်အတွင်းမှာသာမက၊ တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာပါ အလိမ်အညာတွေ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာတွေ၊ ကျင့်ဝတ်ပျက်နေတဲ့.. နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ ဆုံဆည်းနေရတော့ ကျနော်တို့ရင်ထဲ မကောင်းလှဘူး။
အဲလို ကျင့်ဝတ်ပျက်အတ္တ၀ါဒီတွေဆိုတာ..တိုင်းပြည် အတွင်းအပြင်က မြန်မာလူမျိုးတွေသာမက ပြည်ပနိုင်ငံတွေက နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ အစိုးရတွေပါ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ကို ၀န်းရံပြီး ကျနော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေကို ပါးပါးလှီးနေလို့ဖြစ်တယ်။
အဲဒါတွေ ကျနော်တို့မြင်နေရလို့လည်း..ဒီလိုစာမျိုး ရေးဖြစ်သွားတာ။
အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တောင်ကိုးရီးယားခရီးစဉ်အနေအထားတွေကိုပဲ ဖွင့်ချပြောပြချင်တယ်။
လက်ရှိ သမတ အီမြောင်ဘတ် ရန်ကုန်သွားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေဆုံ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာကြောင့်၊ ကိုရီးယား သတင်းစာတွေက.. နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နဲ့ အာဏာရှင်အတွေးအခေါ်သမား မတူမတန် ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်သင့်သလား လို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်း သမတနဲ့ သမတလောင်းကို သူတို့ဆီက သတင်းစာတွေ ဝေဖန်သရော်နေပါပြီ။
..အာဏာရှင်သမီးနဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်တယောက်ရဲ့သမီး နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နဲ့ ယှဉ်တွဲ ဓာတ်ပုံမရိုက်ပါနဲ့ ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။
ဒေါ်စုကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ အာဏာရ Saenuri Party က လက်ရှိ သမတအီမြောင်ဘတ်၊ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီ(Saenuri Party)ရဲ့ အမျိုးသမီး သမတလောင်း
ဘတ်ဂွန်ဟှဲတို့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကာလက မိမိတို့နဲ့ လားလားမှမသက်ဆိုင်သလို နေခဲ့ပြီး မြန်မာ့အရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုလည်းမပြခဲ့ဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံကမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ၊ ပါတီပေါင်းစုံ လက်မှတ်ထိုး တောင်းခံမှုမှာလည်း ခေါင်းရှောင်ခဲ့သလို၊ အဲဒီကာလတွေက စစ်အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေး ပူးတွဲလုပ်ခဲ့တယ်။
သမတလောင်းဘတ်ဂွန်ဟှဲကိုယ်တိုင် အတိုက်အခံအမတ်ဘ၀က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ်ထိုးဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ရုံမက.. ဒီလို
လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရင် မိမိတို့နဲ့ မြန်မာအစိုးရ(စစ်အစိုးရ)တို့ စီးပွားရေး အကျိုးတူဆောင်ရွက်နေတာကို ပျက်ပြားနိုင်တယ်လို့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြောခဲ့ဖူးသူပါ။
အခုသမတလောင်း ဘတ်ဂွန်ဟှဲ.ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကလည်း အာဏာရှင်သမတ ပတ်ချုံဟီးရဲ့သမီး ဖြစ်တယ်။
အာဏာရှင်ဦးနေ၀င်းက မြန်မာအားကစားသမားတွေကို စေလွှတ်ခဲ့တယ်) ပတ်ချုံဟီးက
ဦးနေ၀င်းထက်တနှစ်စောပြီး ၁၉၆၁ မှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး တက်လာသူဖြစ်တယ်။
၁၉၇၉ ကျတော့ သူ့ရဲ့ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲကပဲ လုပ်ကြံခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း တောင်ကိုးရီးယားရဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဟာ အာဏာရှင်ပတ်ချုံဟီးခေတ်ထက် ပိုမိုပွင့်လင်းခဲ့တယ်။
ပတ်ချုံဟီးလက်ထက်က စီးပွားရေးကိုပဲ လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ဒီမိုကရက်တစ်စံချိန်စံညွှန်းတွေ မျက်ကွယ်ပြုခဲ့တယ်။
ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုထက် စီးပွားရေးဖံွ့ဖြိုးမှုကို အသားပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့စစ်အစိုးရအမွေကို ဆက်ခံတဲ့ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ တထပ်တည်းပဲ။
ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေတုံးက တကယ်တမ်း လူအား၊ ငွေအား၊ စိတ်ဓာတ်အားတွေနဲ့ ကူညီအားပေးပြီး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရှေ့တမ်းက ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာက ဒီမိုကရက်တစ်ညီညွတ်ရေးပါတီ(DUP)က အခုတော့ အတိုက်အခံပါတီ ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ယခင်နိုဘယ်ဆုရှင် သမတကင်ဒေးဂျုံပါတီက.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ရှိနေတုန်း အားတက်သရောထောက်ခံခဲ့တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ဖို့ ကိုယ်တိုင် သံရုံးသွားပြီး၊ ဗီဇာလျှောက်ခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ လက်မခံလို့ မတွေ့နိုင်ခဲ့ဘူး။
သူဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောင်းဆိုမှုတွေ၊ လှုံ့ဆော်မှုတွေ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ခဲ့သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆုရရှိဖို့ ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်။
ဒီမိုကရက်တစ်၊ ပါတီဝင်တွေကိုယ်တိုင် ဟိုတုံးက စစ်အစိုးရကို ကန့်ကွက်ရှုံ့ချတာ၊ အရေးယူတာ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ မြန်မာသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲဖော်ဆောင်တာတွေကအစ တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။
မြန်မာအတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကို ကူညီအားပေး ထောက်ခံခဲ့တယ်။
ဒီနေ့အာဏာရပါတီဟာ တချိန်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ ကင်းကင်းကွာကွာ နေခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။
အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တန်း ၀င်ပြီး၊ အာရှ၊ ဥရောပ၊ အမေရိကားနိုင်ငံတွေကို အလည်အပတ်တွေသွား၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ညှိနှိုင်း ၀င်လုပ်နေတာတွေ့တော့မှာ တချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာရလာရင် နောက်ကောက်ကျမှာ စိုးရိမ်ပြီး အလောတကြီး ဆက်ဆံလာဟန်တူတယ်။
အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တောင်ကိုးရီးယားခရီး အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို ဖတ်ကြည့်တော့ တချိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ မိုးထဲလေထဲ ရောက်နေချိန် စာနာ အားပေး ကူညီခဲ့ကြတဲ့ သမတဟောင်း ကင်ဒေးဂျုံပါတီက လူတွေကို ဘေးဖယ်ထားတာတွေ့ရတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လက်ဘက်ရေတခွက် အတူသောက်ခွင့်တောင် ပေးမထားဘူး။
ကိုရီးယားက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအတွက်တောင် မျက်နှာပူစရာအဖြစ်။
စေတနာထား ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အင်ချွန်းမြို့တော်ဝင် ဆုံရောင်ဂီးနဲ့တောင်.. ကိုရီးယားက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ
“အတိုက်အခံအဖွဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှ တွေ့ခွင့်မပေးတောင် ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့ခွင့်ပေးပါ” လို့ မေတ္တာရပ်ခံလို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် မနက်ကျမှ မိနစ်၂၀ လောက် တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အဖွဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှ ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတပါးနဲ့လည်း တွေ့ခွင့်မရဘူး။
“ဘုန်းတော်ကြီးအင်မ်ရောင်တန်” ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ် လွတ်လွတ်ချင်း ရန်ကုန် အင်းယားကန်နဘေးက အိမ်အမှတ် ၅၄ ကို အပြေးအလွှားသွားခဲ့သူပါ။
ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီး ဦးဆောင်တဲ့ Dongguk University ဟာ မြန်မာ့အရေးကို အားပေးရုံမက၊ ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ NLD လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်တွေ၊ စာသင်ကျောင်းတွေအပြင်၊ နာဂစ်ဒုက္ခသည်၊ မိဘမဲ့များ၊ ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များ ထောက်ပံ့ရေး၊ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်၊ ရွှေ့ပြောင်းကျောင်း၊ ဒုက္ခသည်စခန်း.. အစရှိတာတွေကို မပျက်မကွက် ထောက်ပံ့ အားပေးနေတာဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာတွေတွေ့ဆုံမဲ့အစီအစဉ်ကို Seoul University နဲ့ Yonsei University မှာပဲ လုပ်ရမယ်လို့စီစဉ်လိုက်တော့ ကိုးရီးယားက မြန်မာတွေ မျက်နှာပူစရာ အနေအထားတွေဖြစ်နေရော..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တာဝန်ယူဖိတ်ကြားတဲ့ ဖျောင်ချမ်းအိုလံပစ်ကော်မတီက.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် လိုက်ပါမယ့်လူ ၄ ယောက်အတွက်၊ အလာလက်မှတ်ပဲ တာဝန်ယူပြီး၊ အပြန်လက်မှတ် ဝယ်မပေးပါဘူး။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေကို အပြန်လက်မှတ်အတွက် တာဝန်ယူခိုင်းပါတယ်။ ဒီသတင်းက ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား၊ တခုခုတော့လွဲနေပြီလို့ထင်ပြီး မယုံနိုင်ဘူး။
ဒါနဲ့ တောင်ကိုးရီးယားကမိတ်ဆွေတွေကို မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်တော့..အဟုတ်ပဲ။ သတင်းက မှန်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်မရတဲ့.. ဘုန်းတော်ကြီးအင်မ်ရောင်တန်ကပဲ.. သူလေးစားချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေအတွက် အပြန်လက်မှတ် ၀ယ်ပေးလိုက်တယ် တဲ့..။
ပြီးတော့ရှိသေးတယ်.. အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က.. စီးပွားရေးတွေ တွဲပြီး အကြီးအကျယ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ (အခုလည်းလုပ်တုံး) ကိုရီးယားခရိုနီတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ ခမ်းနားတဲ့ညစာစားပွဲတွေ၊ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းပွဲတွေလည်း (၅)ရက်ကြာ ကိုရီးယားခရီးစဉ်မှာ ပါတယ်။
အဲဒီ ကိုရီးယားခရိုနီတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘက်စုံမွန်းမံရေးနဲ့ ပညာရေးအစီအစဉ်အတွက် ဒေါ်လာ သိန်းနဲ့ချီလှုဒါန်းမယ့် သတင်းတွေကလည်း ကြိုထွက်နေတယ်။
ဆင်သွားရင် လမ်းတော့ဖြစ်ပါရဲ့..တိုးတိုက်ထိခိုက်မိလို့ ကျိုးကြေ၊ နင်းမွခံလိုက်ရတွေတော့ အများကြီး။
မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ ဒီလိုကာလမှာ ဘက်ပေါင်းစုံက အကူအညီတွေလိုတာတော့အမှန်ပဲ။
ငွေကြေးနဲ့နည်းပညာ အထောက်အပံ့တွေက ထိတ်တန်းက လိုတာပေါ့။
ဒီထက်ပိုပြီးလိုအပ်တာက“မိတ်ဆွေကောင်း”တွေပါ။ အလည်အပတ်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဒေါ်စုက..မိတ်ဆွေကောင်းတွေအကြောင်း၊ ကျင့်ဝတ်တရားတွေနဲ့မေတ္တာ၊ စေတနာတွေလွမ်းခြုံတဲ့ ဗုဒ္ဓအတွေးအခေါ်ဒဿနတွေကို အမြဲဆွေးနွေး ဝေငှလေ့ရှိတာ သတိထားမိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒေါ်စုယုံကြည်တဲ့၊ လိုလားတဲ့..ကျင့်ဝတ်သီလနဲ့ မိတ်ဆွေစစ် အမျိုးအစားတွေ အမှန်တကယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ၊ မရှိတော့ကျနော်တို့ မသိဘူး။
ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ကတော့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် မိတ်ဆွေကောင်းတွေ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရိုးရှင်းတယ်။ အပေးပဲ ရှိတယ်၊ အယူမရှိဖူး။
ကျနော်တို့လိုအင်ရင် အမြဲပြုံးပြီးပေးတတ်တယ်။ သူတို့ဆီက အများဆုံးရတတ်တာက.. မေတ္တာ၊ စေတနာနဲ့စာနာယိုင်းပင်းမှုတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ပဲ အနှစ်(၂၀)ကျော် ကျနော်တို့ မတ်မတ်ရပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့ပြန်ပေးနိုင်တာကလည်း အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့၊ အပြန်အလှန်မေတ္တာလေးပါပဲ။ ကျနော်တို့မှာ..ငွေမရှိဘူး၊ အာဏာမရှိဘူး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဖူး။
ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့အပေါ် အမြဲခွင့်လွှတ် နားလည်ချစ်ခင်နေတဲ့.. အမိလိုအဖလို ညီလိုအကိုလို…မိတ်ဆွေကောင်းတွေတော့ ရှိပါတယ်။
အာဏာတွေ၊ ငွေတွေထက် သစ္စာတရားနဲ့လူ့ကျင့်ဝတ်တရားတွေပဲ ကျနော်တို့မက်မောတယ်။ လူကိုလူလိုပဲ အသိအမှတ်ပြုချင်တယ်။
လူသတ်သမားကို လူသတ်သမားလို့ပဲ နားလည်ထားချင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေကောင်း၊ မိတ်ဆွေစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိရတာတခုပြောပြချင်တယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်က နယူးဒေလီမှာ မြန်မာ-အိန္ဒိယချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့တခုရဲ့ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ သွားတက်ခဲ့တယ်။
သိတဲ့အတိုင်း အိန္ဒိယက တရုတ်နဲ့မြန်မာ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိတာကို တချိန်လုံးဝေဖန်နေတာ..။
အဲဒီ အခမ်းအနားကိုမြန်မာ သံအမတ်ကြီးဦးကျော်သူ (နောက်ပိုင်း ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး) တက်စကားပြောတယ်။
သူပြောတာက A friend in need isafriend indeed. တဲ့.. လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ..ကူညီသူဟာ မိတ်ဆွေစစ်တဲ့။
၈၈ တုန်းက စစ်တပ်က ဒုက္ခရောက်တော့ အိန္ဒိယက ဘာအကူအညီပေးလို့လဲ..တဲ့၊ တရုတ်က ကျနော်တို့ကို အကူအညီပေးခဲ့တယ် တဲ့။
ရှင်းရှင်းပဲပြောသွားတယ်။ လက်ပံတောင်းမှာ ဦးအောင်မင်း တရုတ်ကျေးဇူး ဖော်ထုတ်သွားတာ နောက်မှ..၊
သမတဟောင်း ဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့သား သံအမတ်ဦးကျော်သူက နယူးဒေလီမှာ အပြတ်ပြောပြီးပြီ။
နားထောင်နေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ပညာရှင်တွေ ဘာတခုမှ မပြောနိုင်ဘူး၊ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့။
၈၈ က စလို့ ကျနော်တို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ မိုးထဲလေထဲ ဒုက္ခရောက်တုန်း ဘယ်သူတွေ ကူညီခဲ့လဲ? ဘယ်သူတွေဝင်ရှုတ်ခဲ့လဲ?
ခရိုနီတွေလား? စီအိုင်အေလား? NGOတွေလား? ..စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလား?
မိတ်ဆွေတု၊ မိတ်ဆွေယောင်တွေ အကြောင်းတော့ သေသေချာချာသိသင့်တယ်..ထင်တာပဲ။ ။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 1:23 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 12:13 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
အကြောင်းအရ်ာသတင်း
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်ခရီးစဉ်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားခရီးစဉ်အတွက် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ထွက်ခွာစဉ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ Hawaii ပြည်နယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ Rotary ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံမှာ မိန့်ခွန်းပြောဖို့အတွက် ကြာသပတေးနေ့က Hawaii ပြည်နယ် Honolulu မြို့တော်ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သတင်းယူဖို့အတွက် VOA ဝိုင်းတော်သား ကိုသိန်းထိုက်ဦး လည်း ရောက်နေတာကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်အစီအစဉ်တွေကို သိရဖို့ မစုမြတ်မွန်က ကိုသိန်းထိုက်ဦးကို ဆက်သွယ်မေးထားပါတယ်။
မစုမြတ်မွန်- ကိုသိန်းထိုက်ဦးရေ၊ သိထားတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်းဆိုရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ဒီကနေ့ ကြာသပတေးနေ့မှာ Hawaii ကို ရောက်လာဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု ကိုသိန်းထိုက်ဦးလည်း Honolulu မှာ ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ နောက်ဆုံး သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အခြေအနေ သိထားသမျ ပြောပြပေးပါရှင့်။
ကိုသိန်းထိုက်ဦး- ဟုတ်ကဲ့။ ဒီခရီးစဉ်ကို စီစဉ်သူတွေရဲ့ အပြောအရတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ Honolulu စံတော်ချိန် မနက်ပိုင်းမှာ ရောက်လာမှာပါခင်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ လုံခြုံရေးအရ ဘယ်လေယာဉ်နဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ ရောက်မယ်ဆိုတာမျိုးကို ကြိုပြီးတော့ ကြေညာတာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ လေဆိပ်မှာလည်း တခြားနေရာတွေမှာလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူတွေ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ကြိုဆိုတာမျိုးတွေတော့ မတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ ပွဲစီစဉ်သူတွေကတော့ ဒီနေ့မနက် ရောက်မှာ သေချာတယ်။ မနက်ဖြန်မှာလည်း သူ အစီအစဉ်တွေ စပြီး စီစဉ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ ရောက်ပြီလို့ပဲ သိရပါတယ်ခင်ဗျ။
မစုမြတ်မွန်- ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ အဲ့တော့ ကိုသ်ိန်းထိုက်ဦးပြောသလို၊ သူ့ရဲ့ အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ ဘာအစီအစဉ်တွေ ရှိတာပါလဲရှင့်။
ကိုသိန်းထိုက်ဦး- ဟုတ်ကဲ့။ မနက်ဖြန်မှာတော့ သူက ဟာဝိုင်အီပြည်နယ် လွှတ်တော်ကို သွားပြီးတော့ လေ့လာမယ်။ နောက်ပြီးတော့ East- West Center ပေါ့နော်၊ အာရှပစိဖိတ်ဒေသနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေကြားမှာ ပိုပြီးတော့ နီးစပ်ဖို့၊ ပိုပြီးတော့ နားလည်မှုရှိဖို့နဲ့ သုတေသနလုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုကို သွားပြီး အဲ့ဒီ့က ခေါင်းဆောင်တွေကို သွားပြီးတော့ တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျ။ Asia-Pacific Center for Security Studies ဆိုတာကို သွားပြီးတော့ လေ့လာဖို့ရှိသလို၊ ညနေပိုင်းမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အသင်းက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။
မစုမြတ်မွန်- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဓိက သူ Hawaii ကို လာရတာက သူငြိမ်းချမ်းရေးဆု လက်ခံဖို့အတွက်နဲ့ နောက်ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံမှာ မိန့်ခွန်းပြောဖို့ လာတာဆိုတော့ အဲ့ဒီ့ဆုပေးပွဲကရော ဘယ်တော့ပါလဲရှင့်။
ကိုသိန်းထိုက်ဦး- ဟုတ်ကဲ့။ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကတော့ တကယ်တမ်းကျတော့ ဇန်နဝါရီ ၂၅ရက်နေ့ကနေ ၂၇ရက်နေ့အထိ ကျင်းပနေတာပါခင်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၆ရက်နေ့ ညနေ မှာ Rotary နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ညီလာခံမှာ သူ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးတော့ Hawaii ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို သူလက်ခံယူမှာပါ ခင်ဗျ။ သူ့ရဲ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အကြမ်းမဖက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် ဒီဆုကို ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာလို့လည်း သိရပါတယ် ခင်ဗျ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ၂၆ ရက်နေ့မှာ Hawaii အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ နေ့လည်စာ စားဖို့ ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ ညနေပိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံမှာ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်ပြီးလို့ရှိရင် ၂၇ ရက်နေ့မှာတော့ Honolulu ကနေ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
မစုမြတ်မွန်- ဟုတ်ကဲ့။ ကိုသိန်းထိုက်ဦး၊ အခုနောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့ Hawaii မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာမယ့်အတွက်ပေါ့လေ။ အဲ့ဒီ့မှာရှိနေတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ သူလာမယ့်ခရီးစဉ်ကို ဘယ်လောက်ကြိုဆိုနေကြတယ်။ ဘယ်လောက်အထိ လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြတယ်လို့ရော ပြောလို့ရပါလားရှင့်။
ကိုသိန်းထိုက်ဦး- မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို သူ့ကို ကြိုဆိုဖို့ တော်တော်လေး ပြင်ဆင်နေကြ တာ တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါပေမဲ့လည်း သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအရ ဒီခရီးစဉ်မှာ တော်တော်များများ ကို တွေ့ဆုံပွဲတွေက သီးသန့်သဘောဆောင်နေတာတော့ တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ သတင်းဌာနတွေကို တချို့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် ဝင်ပြီးတော့ သတင်းယူခွင့်မပေးပါဘူး။
မစုမြတ်မွန်- ဟုတ်ပြီ။ ကိုသိန်းထိုက်ဦးရေ၊ နောက်နေ့တွေလည်း သိသမျ သတင်းတွေ ထပ်ပြီးတော့ ပြောပြပေးပါဦးရှင့်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 12:07 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
သမ္မတက စစ်တပ်ကို ထိုးစစ်တွေ မဆင်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားပေမယ့် တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပေါ် သမ္မတက တမျိုး စစ်တပ်က တဖုံ ဖြစ်နေသလား၊ သမ္မတက စစ်တပ်အပေါ် ဩဇာမညောင်း ဖြစ်နေသလား၊ အခုနောက်ဆုံး လဂျားယန်ဒေသမှာ စစ်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ပြီးဆုံးပြီ။ ဒါကြောင့် ထိုးစစ်ဆင်တာတွေ မလုပ်တော့ဘူးလို့ သမ္မတက ပြောနေတဲ့တိုင် အဲဒီ ဒေသအပါအ၀င် ကချင်ပြည်နယ် အနှံ့အပြား တိုက်ပွဲတွေ အရှိန်ပြင်းပြင်း ဆက်ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ စတဲ့မေးခွန်းတွေ အများကြီး ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို ခုတပတ် ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို လက်ရှိ နိုင်ငံတာဝန်ရှိတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးဌေးဦး တို့ ၃ ဦးစလုံးဟာ ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပခရီးစဉ်တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ခုလို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာအောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ခေါင်းဆောင်တဲ့ အရင် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက လုပ်ပေးခဲ့တာ၊ လမ်းခင်းပေးခဲ့တာ စသဖြင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ အခြေအနေဟာ မြန်မာပြည် ပြည်မ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျဉ်းမှာ တရားဝင် ၀န်ခံတာ မရှိပေမယ့် ဒိုင်ယာလော့လို့ ခေါ်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်နေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရလက်ထက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ ဦးစီးတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်၊ စစ်တပ်၊ တရားရုံးအပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အတိုက်အခံတွေ ပုံစံတမျိုးနဲ့ ဒိုင်ယာလော့ လုပ်နေကြတယ် ဆိုရင် မမှားပါဘူး။
ဒီအခြေအနေဖြစ်လာအောင် အရင် စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတွေဟာ ဟန်ပြ အမျိုးသားညီလာခံကို နှစ်ရှည်လများခေါ်ယူ၊ သူတို့ လိုချင်တာတွေကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းထဲ အတင်းအကျပ်ထည့်၊ နောက်တော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ မတရားမှု လိမ်လည်အကောက်ကြံမှုပေါင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြု၊ ၂၀၁၀ မှာ မသမာတဲ့ နည်းပေါင်းစုံ အသုံးပြုပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အနိုင်ရအောင် ဖန်တီး၊ အဲဒီ မတရားတဲ့ ရလဒ်တွေကနေ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့၊ သူရဦးရွှေမန်းဦးဆောင်တဲ့ လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ဒီလို နေရာအားလုံးမှာ အသာစီးရတဲ့ အခင်းအကျင်းမျိုးကို ဖန်တီးပြီးမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးတာ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်ပေးတာ၊ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ အတိုက်အခံ နည်းနည်းပါးပါးကို လွှတ်တော်ထဲရောက်အောင် ဖန်တီးပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် အရာရာမှာ အသာစီးယူထားပြီးမှ ဒိုင်ယာလော့ လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ရေးကိစ္စမှာလည်း စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတွေဟာ ဒီအတိုင်း စဉ်းစားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်မှအပ အခြား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကို ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ အခြေအနေအပေါ်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးစကား ပြောနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်အရေးကို စဉ်းစားတော့လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် အရင်စစ်အစိုးရက ကေအိုင်အေကို နယ်ခြားစောင့်တပ်လုပ်ဖို့ ဖိအားပေးရင်း ပဋိပက္ခတွေ အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်တဲ့ ကချင်ပါတီ ၃ ပါတီစလုံးကို ပါတီထောင်ခွင့်တောင် မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီနည်းနဲ့ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ အရင်တုန်းကလို အစိုးရ အလိုတော်ရိတွေကိုပဲ နေရာပေးထားတဲ့ အခင်းအကျင်းကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
အလားတူ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ အောက်ပိုင်းက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ် ငြိမ်းချမ်းရေးယူ၊ ဒိုင်ယာလော့ လုပ်သလို၊ ကေအိုင်အေ၊ ကေအိုင်အိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး၊ ဒိုင်ယာလော့ လုပ်တဲ့အခါ အပေါ်စီးက လုပ်နိုင်အောင် နေရာတကာ အသာစီးရယူတဲ့ အနေအထားနဲ့ လုပ်လိုစိတ် ပိုင်းဖြတ်ထားပုံ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ၁ နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်း အစိုးရတပ်ဖွဲ့အင်အား အတော်များများ ကချင်ပြည်နယ်ထဲ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သလို ခုခံစစ်ပဲ လုပ်မယ် ပြောပေမယ့် ထိုးစစ်ဆင်လာလိုက်တာ လေယာဉ်အကူအညီ၊ ရဟတ်ယာဉ်အကူအညီနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အထိ ကြမ်းတမ်းလာတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီလိုဖြစ်လာတာဟာ သမ္မတက စစ်တပ်အပေါ် ဩဇာမညောင်းတာ မဟုတ်သလို သမ္မတနဲ့ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် သဘောထားကွဲလွဲတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြည်မမှာ အရာအားလုံးကို အပေါ်စီးရယူတဲ့ အခင်းအကျင်းဖန်တီးပြီးမှ ဒိုင်ယာလော့ လုပ်သလို စစ်ရေးမှာလည်း အသားစီး အလွန်အကျွံရယူပြီးမှ စေ့စပ်ဆွေးနွေးတာ လုပ်လိုတဲ့ သဘောကို ဖော်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အရင် စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတွေရဲ့ မရိုးသားတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် နောင်လာမယ့် အနာဂတ်မှာ နိုင်ငံရေးအရရော စစ်ရေးအရပါ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အဖြေတခု ရလာမှာ မဟုတ်သေးပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 11:38 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အားမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 10:56 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
“အစိုးရ၀န်ကြီးများ "၀ါးတားတား"လို့ လွှတ်တော်က ပြောပြီ”
လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာ အမတ်တွေမေးမြန်းတာကို ဖြေဆိုရာ အစိုးရ၀န်ကြီးတွေက တိတိကျကျ၊ ရေရေရာရာ မဟုတ်ဘဲ ၀ါးတားတားတွေဖြေနေကြတယ်လို့ မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက မနေ့က လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ အစီရင်ခံစာကို ဦးဖေသန်းက ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးရင်း အဲဒီလို ပြောသွားတာပါ။
"ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းတွေကို ဖြေရာမှာ တချို့ဝန်ကြီးတွေက ပြီးစလွယ်ဖြေတာတွေ၊ ခပ်ပါးပါးနဲ့ ဝါးတားတားဖြေတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်" လို့ ဦးဖေသန်းက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ ဝေစား မျှစားလုပ်ကြတယ်လို့လည်း ဦးဖေသန်းက ပြောပါတယ်။
"ကျောင်းတစ်ဆောင် ဆိုပါတော့၊ ဘတ်ဂျက်တွက်ချက်ပြီး ချပေးတာက သစ်မာသား၊ ပျဉ်းကတိုးသား တာဝန်ခံလုပ်တဲ့သူက သစ်ပွသားနှင့် လုပ်ပြီးတော့ သင်္ဘောဆေးသုတ် ဓာတ်ပုံရိုက် လက်မှတ်ထိုးပြီး အပေါ်တင်ပြ၊ ဝေစားမျှစား စားကြသောက်ကြ။
ဥပမာ မြေပုံ-မင်းပြား လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ပြိုင်ချောင်းတံတား ဆိုရင် အပေါ်က သံယက်မ သံပေါင်တန်းတွေနဲ့ ဘေလီတံတားတိုင်ကျတော့ နှစ်ထွာခွဲလောက်ရှိတဲ့ သစ်လုံးမျောတိုင် အပေါ်ပိုင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အပေါ်တင်ပြ။ အဲဒီလို ကိစ္စမျိုးလည်း နိုင်ငံအနှံ့မှာ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကို ပြည်သူ့ကိုယ်စား လွှတ်တော် မှာမေးတယ်" လို့ ဦးဖေသန်းက ဆိုပါတယ်။
“ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်း တင်ပြချက်”
ဦးဖေသန်း(မြေပုံမဲဆန္ဒနယ်)။ ။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သဂါရဝပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီနေ့ ဆွေးနွေးမှာကတော့ ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး တတိယနေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာကို အကြံပြုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ရဲ့ အမြဲတမ်းကော်မတီတွေဖြစ်တဲ့ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၊ လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီ၊ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီတွေဟာ လွှတ်တော်ရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပိုမို ပီပြင်လာစေဖို့ စွမ်းရည်မြင့်မားလာစေဖို့ အခွင့်‌အရေးတွေမဆုံးရှုံးစေဖို့ အချိန်တိုတိုနဲ့ ထိထိရောက် ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်လို့ လွှတ်တော်ကို အဓိကအားဖြည့် ကျားကန်ပေးနေတဲ့ ဒေါင့်ကြီး ၄ ချောင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီကော်မတီ တွေဟာ မိမိရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာ အခါမလပ် အစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ပြန်လည်ဆွေးနွေးခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း မဆုံးရှုံးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းကော်မတီ ၄ ခုအပြင် နောက်ထပ် လွှတ်တော်က ဖွဲ့ထားတဲ့ ကော်မတီ၊ ကော်မရှင် ၂၀ လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီကော်မတီ၊ ကော်မရှင်တွေကလည်းပဲ ပြည်သူ့အသံ၊ လွှတ်တော်အသံလို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ရဲ့တာဝန်များ ဟန်ချက်ညီညီဝိုင်းဝန်းကြိုးစား တည်ဆောက်နေကြပါတယ်။ ၂ နှစ်တာ လွှတ်တော်သက်တမ်း ရလာသည်နှင့်အမျှ ကော်မတီတွေဟာ အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းတွေ တဖြည်းဖြည်းပြည့်ဝလာတယ်လို့ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ စနစ်တစ်ခု ကတစ်ခုအပြောင်းအလဲကာလမှာ အတွေ့အကြုံအားနည်းကြပေမယ့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ စေတနာနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ ဒီနေ့ ပြည်သူတွေရဲ့ တစ်ရပ်လုံးကလည်းပဲ လွှတ်တော်ကို တစ်နှစ် ထက်တစ်နှစ် အားကိုးလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရနှင့်လွှတ်တော်ကြားမှာလည်း အပြန်အလှန် စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိမှုတွေ ရုပ်လုံးပီပြင်ပေါ်လွင် လို့လာနေပါတယ်။ ကော်မတီ ၄ ခုစလုံးရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုက ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် အစိုးရကိုကောင်းမွန်သန့်ရှင်းတဲ့အစိုးရဖြစ်အောင် အားဖြည့်ကူညီပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီဟာ အစိုးရကို ပညာရှိသတိမြင်ရေးဖို့ အတွက် ထောက်ပြအသိ ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ နိဂုံးချုပ်တင်ပြလိုတာကတော့ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ နှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီဟာ လွှတ်တော်ရဲ့အစိုးရကိုစောင့်ကြည့် ထိန်းညှိတဲ့အပိုင်းမှာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ကော်မတီဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မတီဝင်တွေဟာ မိမိရဲ့တာဝန်တွေကို အထူးစိတ်ဝင် စားတဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့အတူ စာရင်းဇယားများ အစိုးရရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို အကျယ်တဝင့် ရေးသားတင်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အစီရင်ခံစာ မှန်ကန်ပြည့်စုံဖို့ အတွက် ဒေသအလိုက် မေးခွန်းတွေကို စုစည်းပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ အခြေအနေ တွေကို ဆွေးနွေးအတည်ပြုသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် လွှတ်တော်ကော်မတီဝင်ကိုယ်တိုင်က သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတွေကို ဆင်းပြီးတော့ လေ့လာဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ လေစားအပ်ပါသော ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ အကြံပြုချင်တာလေးတစ်ခုကိုတင်ပြရရင် ဆဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေးကာလဟာ ဘတ်ဂျက်ကိုရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲရာမှာ မိမိဒေသကိုအခြေခံပြီး လိုအပ်တာတွေကိုဉာဏ်မီ သလောက် ကြိုးစားပြီး တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပင်ဖြစ်စေ ကောင်းကာမွန်ကာနဲ့ ဘတ်ဂျက် တစ်ခုပြုပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ လွှတ်တော်ရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက် အားနည်းချက် ရှိလို့လွဲချော်မှားယွင်းသွားမှာကိုစိုးပါတယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘတ်ဂျက်နှင့်ပတ်သက်လို့ ကျွမ်းကျင်သူ တွေ တစ်စုတစ်စည်းတည်းလုပ်ကိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့ ဝပ်ရှော့တွေလုပ်မယ် ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဖွဲ့ထားတဲ့ ကော်မတီတွေထဲမှာ ငွေရေးကြေးရေး ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဆိုင်တဲ့ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၊ ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးတိုးတက်မှုကော်မတီစတဲ့ ဒီကော်မတီတွေအမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကွဲပြား နေကြပေမယ့် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ဆိုတဲ့ မြစ်ထဲကို စီးဝင်တဲ့ မြစ်တစ်သွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မတီ ၃ ရပ်ကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်ကော်မတီစသဖြင့်ပေါ့လေ။ သင့်တော်ရာ နာမည်တစ်ခုခုကိုထားပြီးတော့ လုပ်ဆောင်မယ်။ အစီရင်ခံစာတွေရေးမယ်။ တင်ပြမယ်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ အခုလိုပဲ အစီရင်ခံစာတွေကို ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမယ်။ လွှတ်တော်ကာလ မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်း အချင်းချင်းဆွေးနွေးမယ်။ ချပြမယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ချင်းဖြင့် ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် နဲ့အချိန်ကုန်သက်သာပြီးတော့ ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ဘတ်ဂျက်တစ်ရပ်ကို ပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုပြီး အထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ယူဆမိပါကြောင်း စေတနာကောင်းနဲ့ တင်ပြရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်အပ်ပါ တယ်ခင်ဗျား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စပ်ကူးမပ်ကူး ကာလနှင့် လျော်ညီစွာ အရာရာ အားလုံးသည် ရောယောင် ရှုပ်ထွေးနေသည်။ အားလုံး အသွင်ကူးပြောင်း နေကြသော ကာလ ဖြစ်သည့်အတိုင်း သူ့အခန်းကဏ္ဍ၊ ကိုယ့်အခန်းကဏ္ဍ မပီပြင် သေးသလို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အစပ်အဟပ် မတည့် သေး။ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးသည် တစ်နှစ်ခွဲ၊ ၂ နှစ်သားသာ ရှိသေးရာ အားလုံး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရှောရှောရှူရှူ တည့်မတ် ဖြောင့်တန်းသွား ရန် စောလွန်း သေးသည်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလကို ဦးဆောင် နေသူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်တိုင် အသွင်ကူးပြောင်း နေကြရသည်။ယခင် အကျဉ်းစံ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ယခုအချိန်တွင် ရပ်ရေးရွာရေး ပြည်ရေးတွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပါဝင် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ယခင်က လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်ခဲ့သူ အချို့ အစိုးရနှင့် အနီးကပ် လက်တွဲကာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင် နေကြသည်။ ပြည်ပတွင် ဆယ်စုနှစ် နှစ်စု ကြာ အနေကြာခဲ့သူတို့ ပြည်တွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်း အခြေစိုက်ရန် ပြင် ဆင်လာကြပြီ။ အစဉ်အလာအရ တန်ခိုးထွားခဲ့သည့် အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်သည် အခြားသော မဏ္ဍိုင်များဖြစ်သည့် ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်တို့နှင့် အာဏာခွဲဝေ ကျင့်သုံး နေရပြီး ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီရင် ရေးတို့သည်လည်း အပြောင်းအလဲ အတိုင်း လိုက်ပါနိုင်အောင် ပြောင်းလဲ နေရသည်။ တပ်မတော်သည် အုပ်ချုပ်ရေးတွင် တိုက်ရိုက် ဝင်ပါခဲ့ရာမှ ယခုအချိန်တွင် ထိန်းညှိရေးနှင့် တပ်မတော် သက်သက်ကဏ္ဍသို့ ကူး ပြောင်းနေပြီ။ အတိုက်အခံသာ လုပ်ခဲ့ရသည့် အတိုက်အခံ နုိုင်ငံရေးမှ သည် ဆုံးဖြတ်ချက် ယန္တရားတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ရသည့် ပုံမှန်နိုင်ငံရေးဘက်သို့ ဦးလှည့် လာသည်။
ဒေါက်တာမျိုးချစ် by drmyochit
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 6:54 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်